भिडियोमा हेर्नुहोस्, ज्योतिको अर्को उदण्ड गित–हेर्न मात्रै सय रुपया तिर्ने हो हजार तिरे जंगलमा छिर्ने हो ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more भिडियोमा हेर्नुहोस्, ज्योतिको अर्को उदण्ड गित–हेर्न मात्रै सय रुपया तिर्ने हो हजार तिरे जंगलमा छिर्ने हो !
भिडियोमा हेर्नुहोस्, ज्योतिको अर्को उदण्ड गित–हेर्न मात्रै सय रुपया तिर्ने हो हजार तिरे जंगलमा छिर्ने हो !
चैत १ गते, २०७५ - १५:३९
काठमाडौं । लोक गायनबाट अभिनयमा समेत छिरेकी ज्योती मगर कामले भन्दा धेरै पोसाकका कारण चर्चामा रहँदै आएकी छिन् । उनले म्यूजिक भिडियोदेखि विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा लगाउँने पहिरनले उनलाई अधिकांश समय विवादमा तानिरह्यो । तर, उनलाई यस्ता खाले विवादले कुनै असर गरेको देखिदैन् । उनी समयसमयमा विभिन्न पोजका कामुक तस्विरहरु फेसबुक पेजमा अपलोड गरिहन्छिन् ।
ज्योति मगरलाई आम दर्शकले अश्लील गीत गाएको आरोप लगाउने गरेपनि उनी भने आफ्ना कुनै पनि गीतमा अश्लीलता नभएको बताउँछिन् । ‘मेरा कुनै गीत पनि अश्लील छैनन् ।
हेरौ भिडियो –
चैत १ गते, २०७५ - १५:३९ मा प्रकाशित